"Izaho no Andriamanitra... Fa Ahy ny biby rehetra any an'ala, sy ny biby fiompy arivoarivo eny an-tendrombohitra. Fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra... Fa Ahy izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy." Salamo 50:7, 10-12
"Mijere Ahy, dia ho voavonjy ianareo." Isaia 45:22
Eo am-panaovana ny entimodiny i Vonjy, saingy indro misy lalitra manelingelina azy, mipetraka foana eo aminy, eo amin'ny kahie-ny. Sosotra izy, ka manondro ny lalana mankany amin'ny varavarankely izay misokatra midanadana... saingy ny lalitra tsy hankatò zazalahy kely...
Fa ny biby rehetra kosa dia mankatò an'Andriamanitra, Ilay Mpahary azy ireo. Ao amin'ny Baiboly dia misy tantara maro, ahitana fa mankatò an'Andriamanitra ny biby, na dia mifanohitra amin'ny lalànan'ny natiora aza izany, indraindray :
Goaika, izay tia hena, no nahazo baiko hitondra mofo sy hena, marain-tsy hariva, hamelomana mpaminany iray (1 Mpanjaka 17). Ombivavy roa no nandao ny zanany, na dia eo aza ny firaiketany ara-boajanahary amin'izy ireo, ka lasa nandeha tany amin'izay lalana natoron'Andriamanitra (1 Samoela 6). Mpaminany iray, nandany ny alina manontolo tao an-davaka niaraka tamin'ny liona, saingy nohidin'Andriamanitra ny vavan'ireo (Daniela 6). Niteny ny boriky vavy iray, mba hampitandrina ilay mpaminany tsy nankatò (Nomery 22).
Ao amin'ireo filazantsara, Jesosy dia nanana fahefana tamin'ny biby: talohan'ny nanaovany ny asany ampahibemaso, dia niaraka tamin'ny bibidia nandritra ny efapolo andro Izy (Marka 1). Efa niposaka ny andro raha nameno trondro ny haraton'i Simona Izy, na dia mpanarato za-draharaha aza i Simona, ary tsy nahazo na inona na inona nandritra ny alina (Lioka 5). Nibaiko trondro iray Jesosy mba hitondra vola ho an'i Simona, handoavany hetra (Matio 17). Nitaingina zana-boriky mbola tsy nitaingenan'olona Izy, ary dia nanaiky Azy ilay zana-boriky (Lioka 19).
Nankatò an'i Jesosy ny biby, satria Jesosy dia Andriamanitra, Mpahary azy ireo. Fa Jesosy dia Ilay Mpamonjy koa. Aoka isika hankatò ny antsony feno fahasoavana ka hanatona Azy (Matio 11:28).